माओवादीले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिंदै !! | सुदुरपश्चिम खबर
माओवादीले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिंदै !!
२३ चैत, विराटनगर
आज दिउँसो २ बजे बस्ने प्रदेश १ को प्रदेशसभाको सातौं हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठकबाट माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपमा प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको हो ।
गत पुस १२ गते तत्कालीन नेकपाको माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहका ३७ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर सर्वाेच्च अदालतले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि चैत १७ गते माधव नेपाल समूहले प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो ।
अविश्वासको प्रस्ताव पास नहुने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्रले बैठकबाट नै फिर्ता लिने भएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार सोमबार बस्ने बैठकमा प्रस्तावक र समर्थकको सम्बोधनपछि प्रस्ताव फिर्ता हुनेछ ।
९३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका ५१ सांसद छन् । कांग्रेस माओवादी र साना दल एक ठाउँ उभिंदा प्रदेशमा ४२ मात्रै सदस्य छन् । प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । (onlinekhabar बाट सभार)